Giriigga oo Maraykanka ku dacweeyey Turkiga & jawaab uusan filaynin oo la siiyey | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Giriigga oo Maraykanka ku dacweeyey Turkiga & jawaab uusan filaynin oo la...
Giriigga oo Maraykanka ku dacweeyey Turkiga & jawaab uusan filaynin oo la siiyey
(Washington, DC) 12 Nof 2020 – Maraykanka ayaa ka hor yimid sheegashada Giriigga ee ah in hawadoodu ay 10 nautical mayl badda ku dhereran tahay, taasoo loo sheegay inaysan waafaqsanayn Xeerka Caalamiga ah.
Giriigga laftiisa ayaa la sheegay inuu arrintan gaarsiiyey Koongarayska Maraykanka, balse Wasaaradda Arrimaha Dibedda Maraykanka ayaa sheegtay inaysan soo gudbin karin liis ku filan doodda, marka la eego xadka hawada ay Athens sheeganayso.
“Marka la eego Xeerka Caalamiga ah, waxay Maraykanku aqoonsan yihiin in biyaha ka tirsan gayiga Giriiggu ay yihiin 6 nautical mayl, balse Giriiggu arrinta sidaa noolama arkaan,” ayaa lagu yiri warqad kasoo baxday WAD.
Giriigga ayaa sheegta in Badda Ionian Sea ay ku leeyihiin 12 mayl, iyagoo isticmaala 10 mayl, halkii ay 6 ku ekaan lahaayeen, iyagoo arrintaa wadey tan iyo 1930-kii.
Balse Turkiga oo aan taas ku raacsanayn ayay dayuuradihiisu iska galaan 4ta nautical mayl ee dheeraadka ah, taasoo keenta inay markasta cowdaan Giriiggu.
Previous articleMasjidkii 2-aad oo Sweden ku yaalla oo loo diray boosto hanjabaad ah oo ay wax ku jiraan
Next articleDF Itoobiya oo guulo ka sheegatay dagaalka Tigraay & malliishiyaadka TPLF oo dad rayid ah baangado ku gumaaday, Amnesty